प्राकृतिक चिकित्सा — Vikaspedia
प्राकृतिक चिकित्साको परिभाषा
प्राकृतिक चिकित्साका मुख्य विशेषताहरू
प्राकृतिक चिकित्सामा शिक्षा
भारतमा प्राकृतिक चिकित्साको विशेषज्ञता केन्द्र
प्राकृतिक चिकित्सा, यो एउटा यस्तो अनौठो प्रणाली हो जसमा जीवनको शारीरिक, मानसिक, नैतिक र आध्यात्मिक विषयलाई रचनात्मक सिद्धान्तहरूसँग व्यक्तिका सद्भावको निर्माण हुन्छ। यसमा स्वास्थ्यलाई प्रोत्साहन, रोग निवारन र उपचारका साथ-साथै फेरि मजबूती प्रदान प्रदान गर्ने अपार सम्भावना निर्वहण गरेको हुन्छ।
ब्रिटिश नेचरोपेथिक एसोसिएशनको घोषणापत्रका अनुसार, "प्राकृतिक चिकित्सा उपचारको एउटा यस्तो प्रणाली हो जसले शरीरभित्रको महत्वपूर्ण उपचारात्मक शक्तिको अस्तित्वलाई मान्यता दिन्छ।" अतः यो मानव प्रणालीद्वारा रोगहरूको कारण निर्मूल गर्नका लागि अर्थात् रोग ठीक गर्नका लागि मानव शरीरबाट अवान्छित र अप्रयुक्त चीजलाई र विषाक्त पदार्थहरूलाई बाहिर निकालेर मानव प्रणालीको सहायता गर्ने वकालत गर्द छ।
प्राकृतिक चिकित्साका मुख्य विशेषताहरू हुन्
सबै रोगहरू, त्यसका कारण र उपचार एउटा हो। दुख्ने र पर्यावरणीय स्थितिलाई छोडेर, सबै रोगहरूका कारण एउटै हुन् जबकि शरीरमा रुग्णताकारक पदार्थहरूको सञ्चय हुनु हो। सबै रोगहरूको उपचार शरीरबाट रुग्णताकारक पदार्थको उन्मूलन हो।
रोगको प्राथमिक कारण रुग्णताकारक पदार्थको सञ्चय हुनु हो। बेक्टेरिया र भाइरस शरीरमा प्रवेश गरी तबसम्म जीवित रहन्छन् जबसम्म रुग्णताकारक पदार्थको सञ्चय भइ रहन्छ र त्यसका विकासका लागि एउटा अनुकूल वातावरण शरीरमा स्थापित भएको हुन्छ। अतः रोगको मूल कारण रुग्णताकारक पदार्थ हो र बेक्टेरिया दोस्रो कारण हो।
गम्भीर बिमारीहरू शरीरद्वारा आत्त चिकित्साको प्रयास हुन्छ। अतः ती हाम्रा न मित्र हुन्, न शत्रु। पुरानो रोग, गम्भीर बिमारीहरूको गलत उपचार र दमनको परिणाम हो।
प्रकृतिले सबैभन्दा ठूलो मल्हम लगाउने गर्दछ। मानव शरीरमा स्वयं रोगहरूबाट आफूलाई बचाउने शक्ति हुन्छ तथा अस्वस्थ हुँदा स्वास्थ्य पुनः प्राप्त गर्दछन्।
प्राकृतिक चिकित्सामा केवल रोग मात्र होइन रोगीको पूरा शरीरमा असर भएर त्यो नवीकृत हुन्छ।
प्राकृतिक चिकित्साद्वारा पुराना बिमारीहरूबाट पीड़ित रोगीले पनि अपेक्षाकृत कम समयमा सफलतापूर्वक उपचार गर्न सक्दछ।
प्रकृतिको उपचारमा दबिएर बसेका रोगहरूलाई माथि ल्याइन्छ र स्थायी रूपले हटाइन्छ।
प्राकृतिक चिकित्सा एउटै समयमा सबैतिरका विषयहरू जस्तै शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आध्यात्मिक उपचार गर्दछ।
प्राकृतिक चिकित्साले शरीरलाई सम्पूर्ण रूपले उपचार गर्दछ।
प्राकृतिक चिकित्साका अनुसार, "केवल भोजन नै चिकित्सा हो”, कुनै बाहिरका औषधीको प्रयोग गरिँदैन।
आफूले आध्यात्मिक विश्वासका अनुसार प्रार्थना गर्नु उपचारको एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग हो।
यस थेरेपीका अनुसार, भोजन प्राकृतिक रूपमा लिनु पर्दछ। ताजा मौसमी फल, ताजा हरिया पात भएका सब्जीहरू र अङ्कुरित भएका बीजहरूको भोजन धेरै लाभकारी हुन्छ। यी आहार ठूलो मात्रामा तीन प्रकारमा विभाजित छन् जुनचाहिँ यस प्रकार हुन्:
एलिमिनेटिव (निष्कासनका लागि) आहार: तरल-नींबु, साइट्रिक रस, नारियलको पानी, वनस्पति सूप, मही, गहुँका घाँसको रस आदि।
सुखदायक आहार: फल, सलाद, उमालेको/ वाष्पीकृत सब्जीहरू, उम्रेको, सब्जीको चटनी आदि
रचनात्मक आहार: पौष्टिक आटा, अप्रसङ्स्कृत चामल, अलिकति दालहरू, अङ्कुर, दही आदि
क्षारीय हुनका लागि, यी आहारले स्वास्थ्यमा सुधार गर्नमा, शरीरको सफ़ाई र बिमारीका लागि प्रतिरक्षाको प्रतिपादनमा मदत् गर्दछन्। यस प्रकारले भोजनको उचित संयोजन गर्नु आवश्यक छ। स्वास्थ्य रहनका लागि हाम्रो भोजन 20% अम्लीय र 80% क्षारीय हुनु पर्छ। राम्रो स्वास्थ्य चाहने कुनै पनि व्यक्तिका लागि सन्तुलित भोजन नितान्त आवश्यक हुन्छ। प्राकृतिक चिकित्सामा भोजनलाई औषधीका रूपमा लिइन्छ।
उपवास (फास्ट) मुख्य रूपले स्वेच्छाले केही समयका लागि केही मात्रामा वा सबै भोजन, पेय, वा दुवैलाई त्याग्नु हो। यो शब्द पुरानो अङ्ग्रेजीबाट व्युत्पन्न ‘फीस्टन’ बाट निस्केको हो जसको मतलब हो, भोको रहनु, हेर्नु र दह्रो हुनु। संस्कृतमा 'व्रत’ को अर्थ हो 'दृढ़ सङ्कल्प' र 'उपवास’ को अर्थ हो 'ईश्वरको नजिक रहनु'। उपवास सम्पूर्ण, आंशिक र लामो समयसम्मको हुन सक्छ अथवा यो केही समयावधिमा बिराएर गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य संरक्षणका लागि उपवास उपचारको महत्वपूर्ण साधन हो। उपवासमा, मानसिक तयारी एउटा आवश्यक पूर्वशर्त हो। लामो समयको उपवास केवल एकजना सक्षम प्राकृतिक चिकित्सकको पर्यवेक्षणमा रहेर गर्नु पर्छ।
उपवासको अवधि रोगीको उमेर, बिमारको प्रकृति र पहिलेबाट प्रयोग गरिएका औषधीको प्रकारमाथि निर्भर गर्दछ। कहिलेकाहिँ केही समयका लागि दुई वा तीन दिनको उपवासको एउटा श्रृङ्खला शुरू गर्ने र बिस्तारै एक दुई दिनबाट प्रत्येक उपवासको अवधि बढाउने सल्लाह दिइन्छ। उपवास गरिरहेको रोगीलाई कुनै हानि नहुनका लागि उसले आराम र हेरचाह गर्न कुनै प्राकृतिक चिकित्सकको रेखदेखमा गरेको उचित हुन्छ।
उपवास पानी, रस, वा काँचो सब्जीहरूको रससँग गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा राम्रो, सुरक्षित र सबैभन्दा प्रभावी विधि हो नीबुको रसद्वारा उपवासको थालनी गर्नु। उपवास गर्दा शरीरमा जमा अपशिष्ट पदार्थलाई धेरै मात्रामा जलाएर निकाल्ने गर्दछ। हामी क्षारीय रस खाएर यस सफाइ प्रक्रियामा मदत् गर्न सक्छौँ। रसहरूमा शर्कराले ह्रदयलाई मजबूत पार्दछ, त्यसैले रसद्वारा उपवास, त्यसको सबैभन्दा राम्रो तरिका हो। सबै रस, खानु भन्दा पहिले ताजा फलबाट रस तयार पार्नु पर्छ। डिब्बामा बन्द गरेर राखिएको वा जमेका रसको प्रयोग गर्नु हुँदैन। एउटा औपचारिक उपाय छ, जुनचाहिँ उपवासका सबै मामिलाहरूमा गर्नु पर्छ, एनिमाद्वारा उपवासको थालनीमा आन्द्रालाई पूरै खाली गर्नु पर्छ जबकि रोगीलाई ग्यास वा घटक शरीरमा शेष अपशिष्टबाट उत्पन्न हुने अपघटित पदार्थबाट कष्ट नहोस्। उपवासका समयमा एनिमा थोरैमा प्रत्येक दोस्रो दिन लिनु पर्दछ। कुल तरल पदार्थको सेवन लगभग छदेखि आठ गिलाससम्म हुनु पर्छ। उपवास गरेका समयमा शरीरमा सञ्चित विष र विषाक्त अपशिष्ट पदार्थहरूलाई नष्ट गर्ने प्रक्रियामा धेरै ऊर्जा खर्च हुने गर्दछ। त्यसैले यो अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ जबकि उपवास गरेको समयमा रोगीलाई धेरभन्दा धेर शारीरिक र मानसिक विश्राम प्राप्त होस्।
उपवासको सफलता धेरै हदसम्म यसमा निर्भर गर्दछ कि त्यसलाई कसरी तोडिन्छ। उपवास तोडने मुख्य नियम हो: आवश्यक भन्दा धेरै नखानु, भोजन बिस्तारै चबाएर खानु र सामान्य आहारका लागि क्रमिक बदलाव गर्दा धेरै दिन लगाउनु पर्छ।
उपवास बस्दा हुने शारीरिक लाभ र प्रभाव
इतिहासमा हेर्दा धेरैजसो संस्कृतिहरूमा चिकित्सकहरूले प्राचीनकाल देखि नै आधुनिक कालसम्म विभिन्न स्थितिमा चिकित्साको रूपमा उपवासलाई सिफारिश गरेको छ। जबकि पहिलेको अवलोकनको अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति बिना वा आफैँ सिकेर गरिएको थियो तापनि उनीहरू फेरि पनि उपवासलाई एउटा चिकित्सीय साधनका रूपमा प्रयुक्त गर्ने बारेमा भन्दछन्। पहिलेको अवलोकन पशुको व्यवहारमा आधारित थियो तर आज ती पशुका शरीरको क्रिया विज्ञानमा आधारित छ। यस लेखमा म यो विचार गर्ने प्रयास गर्नेछु कि शारीरिक र पाचन लाभको वर्णन गर्ने खालको समीक्षाका माध्यमद्वारा उपवास गरेका मान्छेका स्वास्थ्यलाई राम्रो राख्न कसरी उपयोगी हुन सक्छ। उपवास (केलोरी नियन्त्रण र बिराइ–बिराइ गरिने उपवास) द्वारा प्राप्त शारीरिक प्रभावहरूमा सबैभन्दा मुख्य निम्नलिखित छन्: इन्सुलिन संवेदनशीलतामा वृद्धि जसको परिणामस्वरूप प्लाज्मा ग्लुकोज व इन्सुलिन सान्द्रताको स्तरमा कमी आउछ र ग्लुकोज सहनशीलतामा सुधार हुन्छ, अक्सिडेटिव तनाउको स्तरमा कमी जुनचाहिँ प्रोटीन्स, लिपिड्स वा डीएनएमा घटेको अक्सिडेटिव हानीद्वारा दर्शाइन्छ, गर्मी, अक्सीडेटिव र पाचन तनाउसहित विभिन्न तनाउहरूको प्रतिरोधमा वृद्धि र प्रतिरक्षा कार्यमा बढोत्तरी।
सकल र कोशिकीय शरीर क्रिया दुवैले केलोरीलाई प्रतिबन्ध (सीआर) वा बिराइ-बिराइ उपवास अभ्यासले (आइआर) धेरै प्रभावित गर्दछ। समग्र शरीर क्रिया विज्ञानका हिसाबमा बिना शक शरीरको वसा र द्रव्यमानमा महत्वपूर्ण कमी हुन्छ, जुनचाहिँ एउटा स्वस्थ हृदय प्रणालीलाई सहयोग गर्दछ र रोग गलन हुने घटनाहरू कम गर्दछ। ह्रदयलाई बचाउनुका साथै मुटुको तनाव घटाउन अधिक सहिष्णुता प्रदान गर्दछ जुनचाहिँ होमो सेपिअन्को पोषक कोर हो। कीटोन बोडी (जस्तै β-हाइड्रोक्सिब्युटाइरेट) का जसरी वैकल्पिक ऊर्जा भण्डार होमो सेपिअन्लाई जीवनका अतिरिक्त खप्न सक्ने गरr सक्षम बनाउछ। इन्सुलिन र ग्लुकोज प्रति बढ़ेको संवेदनशीलताले अत्याधिक र हानिकारक रगतले ग्लुकोजमा कटौती हुन्छ र एउटा ऊर्जा स्रोतका रूपमा यसको उपयोग हुन्छ।
माटोद्वारा उपचार धेरै सरल र प्रभावी उपचार साधन हो। यसका लागि प्रयोग गरिने माटो सफा हुनु पर्छ र माटाको सतहबाट3से4फीट तलबाट ल्याउनु पर्छ। माटामा ढुङ्गाका टुकुरा वा रासायनिक मल आदि केही मिसिएको हुनु हुँदैन।
माटाको प्रकृतिका पाँचवटा तत्वहरूमध्ये एउटा हो जसले शरीर, स्वास्थ्य र बिमारी दुवैमा धेरै प्रभाव परेको हुन्छ। माटाका उपयोगको लाभ:
यसको कालो रङ्गले सूर्यको किरणका सबै रङ्ग अवशोषित गरी तिनलाई शरीरमा प्रदान गर्दछ।
माटाले लामो समयसम्म चिसोपन राखिरहन्छ, शरीरमा लेप लगाउदा यसले ठण्डक प्रदान गर्दछ।
यसको आकार र एकरूपतालाई पानी हालेर सजिलै बदलाउन सकिन्छ।
यो सस्तो र सजिलै उपलब्ध हुन्छ।
प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले पहले ढुङ्गा, घाँसका झुत्रा र अरू अशुद्धिहरूलाई छुट्याउनका लागि माटो सुकाएर धूलो पारेर छान्नु पर्छ।
स्थानीय अनुप्रयोगका लागि माटाको पेक
एउटा पातलो, भिजेको मलमलको कपड़ालाई हिलोमा चोबेर रोगीको पेटक आकारका आधारमा एउटा हलुको ईँटाको आकारमा त्यसलाई बनाउनु पर्छ। माटाको पेकलाई प्रयोग गर्ने समय 20 देखि 30 मिनिटसम्म हो। जाडो मौसममा प्रयोग गर्दा, माचाको पेकमा एउटा कम्बल राख्नु पर्छ र शरीरलाई पनि राम्रोसँग ढाक्नु पर्छ।
माटाका पेकबाट लाभ
पेटमा लगाउनाले यसले सबै प्रकारका अपच हटाउछ। यसले आन्द्राको तातोपन हटाउन र पेरिस्टालसिसलाई उत्तेजित गर्न प्रभावी हुन्छ।
कन्जास्टिव टाउको दुखाइमा टाउकामा माटाको मोटो पेक लगाउनाले दुखाइबाट तुरून्त राहत पाइन्छ। त्यसैले जब एउटा लामो समयसम्म चिसो प्रयोग गर्ने आवश्यकता पर्दछ, तब यसको सिफारिश गरिन्छ।
आँखामा पेकको प्रयोग नेत्रश्लेष्मलाशोथ, नेत्रगोलकको हेमरेज, लुतो, एलर्जी, अपवर्तन थोर भएको दोषले जस्तै निकट दृष्टि र दूरदृष्टिका त्रुटिहरूका मामिलामा उपयोगी हुन्छ, विशेष रूपमा मोतिबिन्दु, जसमा यो नेत्रगोलकको तनाउलाई घटाउन मदत् गर्दछ।
अनुहारमा माटाको प्रयोग
भिजेको माटो अनुहारमा लगाएर 30 मिनटसम्म सुक्न दिनु पर्छ। यसले छालाको रङ्गमा सुधार ल्याउने र चन्डीफोर हटाउने तथा छालाका प्वाल खोल्नमा सहाय गर्दछ र डन्डिफोर उन्मूलन गर्न सहायक हुन्छ। यसले आँखाका छेउछाउका काला घेराहरू हटाउनमा पनि सहायक हुनेछ। 30 मिनिट पछि अनुहारलाई चिसो पानीले राम्रोसँग धुनु पर्नेछ।
रोगी बसेको वा सुतेको अवस्थामा लगाइने गरिन्छ। यसले शरीरको संरचनामा सुधार ल्याएर छालाका पेशीहरूलाई सक्रिय पारेर छालाको स्थितिमा सुधार गर्न सहाय गर्दछ। नुहाउदा चिसो लाग्नेबाट बच्नका लागि सावधान हुनु पर्दछ। पछि, रोगीलाई चिसो पानीले राम्रोसँग धुनु पर्छ। यदि रोगीले चिसो अनुभव गऱ्यो भने तातो पानीको प्रयोग गर्नु पर्छ। त्यसपछि रोगीलाई तुरून्तै सुकाएर तातो ओछ्यानमा सार्नु पर्छ। माटाले स्नान गर्ने समय 45 देखि 60 हुन सक्छ।
माटाको स्नानमा हुने लाभ
माटाको प्रभावले शरीरमा नवीनता प्रदान गर्दछ, स्फूर्ति र सक्रियता ल्याउछ।
घाउ र छालाका रोगहरूका लागि, माटाको प्रयोग राम्रो हो।
मोटोद्वारा उपचारको प्रयोग शरीरलाई चिसोपन ल्याउनका लागि हुन्छ।
यसले शरीरका विषाक्त पदार्थहरूलाई तरलीकृत गरी अवशोषित गर्दछ र अन्ततः तिनलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्दछ।
कब्ज, तनाउका कारण टाउको दुख्ने, उच्च रक्तचाप, छाला आदिजस्ता विभिन्न रोगहरूमा माटाको सफलतापूर्वक प्रयोग गरिन्छ।
गान्धीजी कब्जबाट छुटकारा पाउनका लागि माटाको पेकको प्रयोग गर्दथे।
जलोपचार प्राकृतिक चिकित्साको एउटा शाखा हो। यसले पानीका विभिन्न रूपहरूको उपयोग गरेर विकारहरूको उपचार गरिन्छ। पानीका प्रयोगको यो रूप धेरै समय अघिदेखि प्रयोगमा लाइएको छ। जलतापीय चिकित्साले अतिरिक्त रूपमा तापमानको प्रभावको उपयोग, तातो र चिसो स्नान, सुत्ने, आवरण आदिमा र त्यसका सबै रूपहरू जस्तै ठोस, तरल, बाफ र बरफ, आन्तरिक र बाह्य रूपमा, उपयोग गरिन्छ। पानी नि:सन्देह रोगका लागि सबै उपचारात्मक एजेन्टहरूमा सबैभन्दा पुरानो हो। यस महान चिकित्सा माध्यमलाई व्यवस्थित गरी एउटा विज्ञानका स्थापित गरिएको छ। हाइड्रिएटिक अनुप्रयोग साधारणतः विभिन्न तापमानमा दिइन्छ, अनुप्रयोगको तापमानको तालिका तल दिइएको छ:
धेरै चिसो (बरफको अनुप्रयोग)
104 भन्दा धेर
40 भन्दा धेर
पानीको प्रभाव र उपयोग
सफा चिसो पानीले राम्ररी नुहाउनु जलोपचारको एउटा उत्कृष्ट रूप हो। यसखाले स्नानले छालाका सबै रौँका प्वाल खोलेर शरीरलाई हलुको र ताजा बनाउछ। चिसो स्नानमा शरीरका सबै प्रणालीहरू र मांसपेशीहरूलाई सक्रिय बनाउछ र नुहाए पछि रक्त परिसंचरणमा सुधार हुन्छ। नदी, तलाउ वा झर्ना आदिमा विशेष मौकामा नुहाउने पुरानो परम्परा एकखाले जलोपचारको प्राकृतिक रूप नै हो।
यो इच्छित तापीय र यान्त्रिक प्रभाव उत्पन्न गर्नका लागि सबैभन्दा धेर लचिलो माध्यम हो र एउटा सीमित क्षेत्र वा पूरा शरीरको तहमा लागू गर्न सकिन्छ।
यो गर्मी अवशोषित गर्न सक्षम छ र धेरै तत्परताका साथ गर्मी बाहिर निकाल्ने गर्दछ। त्यसैले, यो शरीरबाट अतिरिक्त गर्मी बाहिर निकाल्न वा त्यसमा गर्मी प्रवेश गराउनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जबकि चिसो पानीको प्रयोगको मुख्य उद्देश्य हो शारीरिक गर्मी निकालेर वा घटाउन होइन, जबकि गुमाएको गर्मीको तुलनामा धेरै गर्मी उत्पन्न गर्ने महत्वपूर्ण शक्ति बढाउनु।
. एउटा सार्वभौमिक विरेचन भएका नाताले, यसको उपयोग आन्तरिक, एनीमा वा कोलोनिक सिंचाई वा पानी खाएर, युरिक एसिड, युरिया, नुन, अत्याधिक चिनी, र कुनै अन्य रगत र खाद्य रसायन जुनचाहिँ अपशिष्ट उत्पाद हुन्, को उन्मुलनमा धेरै सहायता गर्नु हो।
यो ध्यान राख्नु पर्छ जबकि यी तरिकाहरूको सफल उपयोगका लागि महत्वपूर्ण शक्तिको एउटा निश्चित खाँचो पर्दछ। जहाँ शक्ति थोरै छ, यो निरर्थक हो। गम्भीर स्थितिहरूको जस्तै महत्वपूर्ण शक्ति धेरै हुन्छ र महत्वपूर्ण प्रतिक्रियामा एउटा निश्चितता हुन्छ। पुरानो मामिलामा, जहाँ महत्वपूर्ण शक्ति कम हुन्छ, यो स्नान कम उपयोगी हुन्छ, तर यसखाले मामिलाहरूमा पेक उपयोगी हुन्छ किनकि ती आफ्नो अनुप्रयोगमा तुलनात्मक रूपमा हलुको हुन्छ।
उपचारमा पानीका धेरै रूपहरूमा प्रयोग गरिन्छ। उपचारका विभिन्न प्रकार छन्:
भिजेको पट्टी र पुल्टिस
चिसो सेक: भुडीमा चिसो सेकाइ
तापिय सेकाइ: छातीको पेक, पेटको पेक, भिजेको हत्केलाको पेक, घाँटीको पेक, घुँडाको पेक, र पूरा भिजेका च्यादरको पेक
तातो र चिसो सेकाइ: टाउको, फोक्सो, मिर्गौँला, गेस्ट्रो यकृत, श्रोणि र पेटमा तातो र चिसो सेकाइ
हिप स्नान - चिसो, तटस्थ, तातो, Stiz स्नान र वैकल्पिक हिप स्नान
मेरुदण्डको स्नान र मेरुदण्मा स्प्रे: चिसो, तटस्थ, तातो
खुट्टा र पाखुरा स्नान: खुट्टाको चिसोपन, तातो स्नान, पाखुरा स्नान, सङ्युक्त रूपले तातो खुट्टा र पाखुरा, कन्ट्रास्ट पाखुराको स्नान र कन्ट्रास्ट खुट्टाको स्नान।
साँसद्वारा भाप लिनु र भाप स्नान गर्नु
जेट स्प्रे मालिस
चिसो, तटस्थ, तातो, वैकल्पिक, चक्रिय जेट स्प्रे मालिस
अभिसिन्चन स्नान: चिसो अभिसिन्चन, तटस्थ अभिसिन्चन, तातो अभिसिन्चन, तातो एवं चिसो अभिसिन्चन
ट्रामा जेट स्प्रे
डेबेर स्नान: चिसो पानीमा डुबेर स्नान, घर्षणका साथ चियो डुबुल्की, तटस्थ डुबेर स्नान, तातो पानीमा डुबाइ, तटस्थ अर्ध स्नान, एप्सोम नुनसँग ग्रेजुएटेड डुबाइ स्नान, अस्थमा स्नान, भुमरो स्नान, पानीभित्र मालिस
एनिमा: ग्रेजुएटेड एनिमा, योनिको धुवाइ, चिसो धुवाइ, तटस्थ धुवाइ, तातो धुवाइ
हाइड्रो उपचारका तरिकामध्ये एउटा कलोन (ठूलो आन्द्रा)को थेरेपी हो।
कलोन (मलाशय)को जलोपचार
यो कलोन वा ठूलो आन्द्राको सफाइ वा फ्लशिङ्गको प्रक्रिया हो। यो उपचार एउटा एनिमाको समान हो, तर धेरै व्यापक छ। यसले रोकिएको मललाई कलोनबाट निकाल्ने वा त्यसको दुर्गन्छ हटाउनका लागि सौम्य दबाउ (नदुखाइ) सफा फ़िल्टर्ड पानीको उपयोग गर्दछ। सत्रको संख्या व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ। ठूलो आन्द्रालाई राम्रोसँगले सफा गर्नका लागि धेरै मान्छेलाई 3-6 उपचार गर्ने एउटा श्रृङ्खलाको आवश्यकता पर्दछ।
जलोपचारको लाभ र शारीरिक प्रभाव
जलोपचारको स्वास्थ्यवर्धक र चिकित्सकीय गुण उसको यान्त्रिक र/वा तापीय प्रभावहरूमाथि आधारित हुन्छ। यो तातो र चिसो उत्तेजना प्रति, तातोको लामो अनुभव, पानीबाट उत्पन्न भएको दबाव र त्योद्वारा प्रदत्त अनुभूति प्रति शरीरको प्रतिक्रियाको लाभ पाउछ। नसाहरूले, छालामा गरिएको आवेगलाई शरीरको भित्रसम्म लैजान्छ, जहाँ ती प्रतिरक्षा प्रणालीका उत्तेजक, तनाउ हर्मोनको उत्पादनलाई प्रभावित गर्ने, परिसंचरण र पाचन क्रियालाई उत्तेजित गर्ने, रक्त प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्ने र दुखाई प्रति संवेदनशीलता घटाउनमा सहायक हुन्छ। साधारणतः तातो आन्तरिक अङ्गहरूको गतिविधिलाई थोर पारेर शरीरलाई शान्त पार्दछ। यसका विपरीत चिसोपनले, उत्तेजित पार्दछ र आन्तरिक गतिविधिहरूमा वृद्धि गर्दछ।
यसको यान्त्रिक क्रिया स्नान गरेका बेला हुन्छ जब एउटा कुण्ड, एउटा पुल वा एउटा भुमरीमा डुबेको शरीरको वजनमा 50% देखि 90% कम हुन्छ र एक खालको भारहीनताको अनुभव हुन्छ। शरीरका गुरुत्वाकर्षणका निरन्तर खिँचावबाट परित्राण पाइन्छ। पानीको पनि हाइड्रोस्टेटिक प्रभाव छ। यसले मालिको जस्तै अनुभव प्रदान गर्दछ जबकि पानीले बिस्तारो-बिस्तारै तपाईणको शरीरलाई मथ्ने गर्दछ। गतिमा, पानीले छालालाई स्पर्श गर्दै ग्राह्य गर्को भागलाई उत्तेजित पार्दछ र रक्त परिसंचरणलाई बढ़ाउने तथा खुम्चिएका मांसपेशिहरूलाई ढिला पार्दछ।
मालिस निष्क्रिय व्यायामको एउटा उत्कृष्ट रूप हो। यो शब्द ग्रीक शब्द 'मस्सिअर’ जसको अर्थ हो मथ्नु, फ्रेंच ‘मथ्दा हुने घर्षण’ वा अरबी मालिस जसको अर्थ “स्पर्श गर्न, अनुभव गर्नु वा सम्हालिनु" हो वा लेटिन मालिसबाट जसको अर्थ हो "भारी, आटा” बाट व्युत्पन्न। मालिस भौतिक (शारीरिक), कार्यात्मक (शारीरिक), र कतिपय मामिलीमा मनोवैज्ञानिक उद्देश्यहरू र लक्ष्यहरूका साथै कमलो ऊतकको हेरफेरको अभ्यास हो। यदि सही तरिकाले एउटा नाङ्गो शरीरमा गऱ्यो भने, तब यो अत्याधिक उत्तेजक र स्फूर्तिदायक हुन्छ।
मालिस पनि प्राकृतिक चिकित्साको राम्रो स्वास्थ्य रहनका लागि एउटा आवश्यक साधन हो। मालिसमा शरीरमा पर्ने दबाउका साथै संरचित, असंरचित, स्थिर, वा गतिमान-तनाउ, गति, वा कम्पनका साथै हातबाट वा यान्त्रिक तरिकाले हलचल सामेल छ। लक्षित ऊतकहरूका मांसपेशिहरू, टेंडंस, लिगामेंट, छाला, जोडाइ, वा अरू संयोजी ऊतकहरूका साथ-साथै लचिला वाहिकाहरू सामेल हुन सक्छन्। मालिस हात, औलाहरू, कुहिनो, घुँडा, हातका नारी र खुट्टामा गर्न सकिन्छ। लगभग अस्सवटाभन्दा धेरै विभिन्न मान्यताप्राप्त मालिसका साधन छन्। यसले रगत परिसंचरणमा सुधार र शारीरका अङ्गहरूलाई मजबूत बनाउने काम गर्दछ। जाडाको मौसममा, सारा शरीरमा मालिस गरेपछि सूर्य स्नान गर्नु स्वास्थ्य र शक्ति संरक्षणका लागि राम्रो हो भनिन्छ। यो सबैका लागि लाभदायक हो। यो मालिस र सूर्यको किरणको चिकित्साले संयुक्त रूपमा लाभ हुन्छ। बिमारी भएको स्थितिमा, आवश्यक उपचारात्मक प्रभाव मालिसका विशिष्ट तकनीकी माध्यमद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। मालिस उनका लागि एउटा विकल्प हो जसले व्यायाम गर्न सक्दैन। व्यायामको प्रभाव मालिसबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। तोरीको तेल, तिलको तेल, नारियल तेल, आलसको तेल, बास्ना आउने तेल जस्ता विभिन्न तेलहरूको उपयोग गरिन्छ, जुनचाहिँ उपचारात्मक प्रभाव पार्दछ।
मालिसका सातवटा तरिका हुन्छन् र यी हुन्: स्पर्श, मालिस गर्दा थपथपाउनु, घर्षण,थिच्नु, कुट्नु, कम्पन (हल्लाउनु), र डोर्नीहरूलाई हल्लाउनु। रोगको स्थिति र मालिस गरिएका भागहरूको अनुसार हलचल भिन्न हुन्छ।
धेरैजसो बिमारीहरूमा उपयोगी हुने मालिसको अर्को रूप कम्पनयुक्त मालिस, पाउडर मालिस, जल मालिस, सुक्खा मालिस हुन्। नीमका पातको पाउडर, गुलाबको फूलका केस्रा हरू मालिसका लागि बास्नादार बनाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ।
मालिसको शारीरमा प्रभाव
रिफ्लेक्स प्रभाव (तन्त्रिकाद्वारा मध्यस्थता गरिएका प्रतिक्रियाहरू)
धमनिहरूको वेसोडाइलेशन (व्यासमा वृद्धि)
क्रमाकुन्चनको उत्तेजना (पाचनमा मदत् गर्दछ)
मांसपेशिहरूको टोनमा वृद्धि वा कमी
उदर गुहामा अङ्गहरूको गतिविधि बढदछ
ढीलापनको प्रतिक्रिया आरम्भ हुन्छ
मांसपेशिहरूमा सुखदायक वा उत्तेजक प्रभाव
ह्रदयलाई उत्तेजित पार्दछ, शक्ति र संकुचनको दर बढाउदछ
प्रतिरक्षा प्रणालीको क्षमता बढ़ाउछ
यान्त्रिक प्रभाव (हातद्वारा सोझै लागू दबावबाट उत्पन्न भएका प्रतिक्रियाहरू)
शिराहरूको वापसीमा वृद्धि
लसिका प्रवाह, लसिका जल निकासीमा वृद्धि
श्लेष्म ढिला हुनु (श्वसन प्रणाली)
साना मांसपेशिहरूका लागि खिचाउ/ मांसपेशिहरूका रेशा ढिला हुनु
मांसपेशिहरूको तापमानमा वृद्धि
स्थानीय स्तरमा पाचन दरमा वृद्धि र ग्यासीय विनिमय
निशानको ऊतक तान्दछ
मांसपेशिहरूको टोनमा कमी/मांसपेशीहरूको टोनमा वृद्धि
गतिको सीमामा वृद्धि
जोर्नीको उचित यान्त्रिकी/बायोमेकानिक्सको बहाली
मांसपेशीहरूको असन्तुलनको उन्मूलन
कमजोर मांसपेशिहरूलाई मजबूत बनाउनु
शरीरका सबै भागहरूमा गरिने सामान्य मालिस धेरै अर्थमा अति फायदेमन्द हुन्छ। यस तन्त्रिका तन्त्रलाई टोन भनिन्छ, श्वसनलाई प्रभावित गर्दछ र फोक्सो, छाला, मिर्गौँला र आन्द्राको रूपमा विभिन्न निकास अङगहरूको माध्यमले विष र शरीरबाट अपशिष्ट पदार्थलाई उन्मुलन छिटो पार्दछ। यसले रगत परिसंचरण र पाचन प्रक्रियालाई पनि बढउने गर्दछ। मालिसले अनुहारका रेसाहरू, पसेका गाला र गर्दनलाई भर्नमा मदत् गर्दछ र सडकेको, दुखएको तथा निदाएका मांसपेशिहरूलाई आराम पुऱ्याउछ।
सहकर्मीद्वारा समीक्षा गरिएको चिकित्सा अनुसन्धानबाट दुखाइबाट मक्ति, चिन्ता र थकाइको लक्षण कम हुनु रक्तचाप, हृदयको दर र चिन्तामा अस्थायी रूपले कमी आउनु जस्ता लाभ सामेल भएको थाहा लाग्दछ। मालिसले के गर्न सक्दछ, यसका पछाडिका सिद्धान्तहरूमा सामेल छन् नोसिसेप्शन अवरुद्ध गर्नु (गेट नियन्त्रण सिद्धान्त), पेरासिम्पेथेटिक तन्त्रिका तन्त्रलाई सक्रिय गर्नु जसले एन्डोर्फिन र सेरोटोनिनलाई रिहा गर्न प्रोत्साहित होस्, तन्तुमयता वा निशान ऊतकलाई रोक्नु लसीको प्रवाह बढनु र निनद्रामा सुधार सामेल छ, तर अहिले यस खालको प्रभावलाई राम्रोसँगले डिजाइन गरिएको नैदानिक अध्ययनद्वारा पुष्ट गर्न बाँकी छ।
एक्युप्रेशर उपचार एउटा प्राचीन चिकित्सा कला हो जसमा शरीरको प्राकृतिक आत्म उपचारात्मक क्षमताहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि औँलाहरू वा कुनै पनि तिखो नभएका वस्तुले छालाको सतहमा लयात्मक तरिकाले विशेष बिन्दुहरू, जसलाई ‘एक्यु बिन्दु’ (ऊर्जा संग्राहक बिन्दु) भनिन्छ, मा थिचिन्छ। जब यी बिन्दुहरूलाई थिचिन्छ, त्यसले मांसपेशिहरूको खुम्चाइ घटाउछ र ठीक हुनमा सहायता गर्नका लागि रक्त संचार वा शरीरमा शक्तिलाई बढ़ावा दिइन्छ।
एक्युपंक्चर र एक्युप्रेशरमा एकसमान बिन्दुहरूको उपयोग हुन्छ जबकि एक्युप्रेसरमा हात वा कुनै पनि तिखो नभएको वस्तुको कमलो, तर मज़बूत दबाउको उपयोग हुन्छ, एक्युपंक्चरमा सियोको प्रयोग हुन्छ। एक्युप्रेसरको कम से कम 5000 सालदेखि एउटा चिकित्सा कलाको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यस पूरा स्वास्थ्य प्रणालीलाई 3000 स्थितिमा उपचारमा प्रयोगका लागि लेखितगरिएको छ। अब एक्यु बिन्दु सामान्यतः ट्रान्स्क्युटेनस विद्युत तन्त्रिका उत्तेजना (अर्थात् टीईएनएस) र विशिष्ट तरङ्ग दैर्ध्यमा एलईडी डायोडले लेजर प्रकाशको उपयोगद्वारा उपचार गरिन्छ जसको छिटो र स्थायी प्रभाव देखिन्छ।
एक्युप्रेसर दर्शन र एक्यु बिन्दु उत्तेजना एक्युपंक्चर जस्तै समान सिद्धान्तहरूमा आधारित छ। दबाउ, बिजुलीद्वारा उत्तेजना वा सियोका बदलामा प्रकाश लेजरको उपयोग गरेर यो शिरोबिन्दु भनिने, सम्पूर्ण शरीरमा दौडने ऊर्जाका रेखाको विशिष्ट रिफ्लेक्स बिन्दुहरूलाई उत्तेजित गर्ने काम गर्दछ। कुल 14 मुख्य शिरोबिन्दु रेखाहरू हुन्छन् जसबाट प्रत्योक व्यक्तिका शरीरको विशेष अङ्गसँग सम्बद्ध हुन्छ। जब महत्वपूर्ण ऊर्जा शिरोबिन्दुबाट एउटा सन्तुलित र समान तरिकाले प्रवाहित हुन सक्षम हुन्छ, तब परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य रारो हुन लाग्दछ। जब तपाइँ दुखाइ वा बिमारीको अनुभव गर्नु हुन्छ भने यो एउटा सङ्केत हुन्छ कि तपाइँका शरीर भित्र ऊर्जाको प्रवाहमा अवरोध वा रिसाव भएको छ।
उपयुक्त बिन्दुलाई खोज्नका का लागि, बिस्तारै क्षेत्रको तबसम्म जाँच गर्नुहोस् जबसम्म त्यो बिन्दु भेटिँदैन जुनचाहिँ ‘फनी बोन’ को आभास दिँदैन वा जुन संवेदनशील, नरम वा दुख्ने नहोस्। त्यसपछि बिन्दुलाई यति जोडले दबाउनुहोस् कि त्यो दुखोस्। उत्तेजना घूर्णन दबाउद्वारा दिइन्छ जसमा पाँच सेकेन्डसम्म स्थिर दबाउ र पाँच सेकेन्सम्म दबाउ हटाइन्छ। साधरणतः प्रत्येक उपचार सत्रका लागि एक मिनिट पर्याप्त हुन्छ।
एक्युप्रेसर टाउको दुखाइ, आँखाको तनाउ, साइनसको समस्या, गर्धनको दुखाइ, पीठ्युको दुखाइ, गाँठा, मांसपेशीहरूमा दुख्ने, अल्सरको दुखाइ, मासिक धर्म, पीठ्युको तल्लो भागमा दुख्ने, कब्ज र अपच, चिन्ता, अनिद्रा आदिमा आराम दिनमा प्रभावी ढङ्गले मदत् गर्दछ।
शरीरको सन्तुलन र राम्रो स्वास्थ्य राख्नका लागि एक्युप्रेशरको उपयोगको ठूलो लाभ छ। एक्युप्रेसर को आराम दिने खालको स्पर्शले तनाउ घटाउछ, परिसंचरण बढ़ाउछ, सन्तुलनले शरीरलाई गहिरो आरामको लागि सक्षम बनाउछ। तनाउबाट छुटकारा पाउन, एक्युप्रेसरले रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई मजबूत बनाउछ र सन्तुलनले राम्रो स्वास्थ्यलाई प्रोत्साहन दिन्छ।
एक्युपंक्चरले शरीरको विशिष्ट बिन्दुमा मसिना सिया उनेर वा हल्लाएर दुखाइबाट आराम दिने प्रक्रिया वा उपचारात्मक उद्देश्यको एउटा प्रक्रिया हो। एक्युपंक्चर शब्द लेटिन एकस, "सियो", सन्तुलन पङ्गेरे "उन्नु" बाट बनिएको हो।
परम्परागत चीनी चिकित्सा सिद्धान्तका अनुसार, एक्युपंक्चर बिन्दु शिरबिन्दुहरूमा स्थित छ जसका सहायताले क्युई, महत्वपूर्ण ऊर्जा, बहन्छ। एक्युपंक्चर बिन्दुहरू वा शिरबिन्दुहरूको अस्तित्वका लागि कुनै ज्ञात संरचनात्मक वा ऐतिहासिक आधार छैन।
चीनमा, एक्युपंक्चरका उपयोग भएको सबैभन्दा पहिलेको प्रमाण पाषाण युगदेखिको प्राप्त भएको छ, जहाँ यसका लागि बियान शी वा दरो ढुङ्गाको प्रयोग गरिन्थ्यो। चीनमा एक्युपंक्चरको मूल अनिश्चित छ। सबैभन्दा पहिलो चीनी चिकित्सा लेख जसले एक्युपंक्चरको वर्णन गर्दछ, पीले सम्राटको आन्तरिक चिकित्साको क्लासिक (एक्युपंक्चर इतिहास) हुआंग्डी नैजिंग हो, जो 305-204 ई.पू. को हाराहारीमा सङ्कलित गरिएको थियो। कुछ हाइरोग्लाइफिक्स 1000 ई.पू. मा भेटाइएको छ जुन एक्युपंक्चरको प्रारम्भिक उपयोगको सङ्केत हुन सक्छ एउटा पौराणिक कथाका अनुसार एक्युपंक्चरको थालनी चीनमा तब भयो जब केही सैनिकहरू युद्धमा तीर लागेर घायल भएका थिए, शरीरका अन्य भागमा दुखाइबाट आरामको अनुभव भयो, सन्तुलन फलस्वरूप मान्छेले उपचारका लागि तीरले (सन्तुलन पछि सियोले) प्रयोग शुरू गरे। एक्युपंक्चरको प्रसार चीनबाट कोरिया, जापान, वियतनाम, पूर्वी एशियाका अन्य स्थानहरूमा पनि भयो। 16 औँ सदीमा पुर्तगाली मिशनेरीले पश्चिममा एक्युपंक्चरको रिपोर्ट ल्याउनेहरूमा पहिला थिए।
एक्युपंक्चरको परम्परागत सिद्धान्त
पारम्परिक चीनी औषधीमा, शरीर भित्र यिन सन्तुलन यांगका सन्तुलनका शर्तलाई "स्वास्थ्य" मानिन्थ्यो। कसैले यिन सन्तुलन यांगको सहानुभूतिपूर्ण सन्तुलन परा-सहानुभूतिपूर्ण तन्त्रिका प्रणालीसँग तुलना गरेको छ। एक्युपंक्चरा विशेष रूपले महत्वपूर्ण हो क्युईको मुक्त प्रवाह, अनुवाद गर्नका लागि कठिन अवधारणा जुनचाहिँ चीनी दर्शनमा व्याप्त छ सन्तुलन साधारणतः "महत्वपूर्ण ऊर्जा" का रूपमा अनुवादित छ। क्यूई सारहीन छ सन्तुलन यसैले यांग; त्यसको यी, सामग्री समकक्ष रगत हो (यो शारीरिक रगतभन्दा भिन्नै हो, सन्तुलन ठूलो तवरमा यो त्यसको समकक्ष हो) एक्युपंक्चर उपचार क्यूई सन्तुलन रगको प्रवाहलाई नियन्त्रित गर्दछ, जहाँ उसको कमी हुन्छ त्यहाँ टोनिफाइ गर्दछ; जहाँ अतिरिक्त हुन्छ त्यहाँबाट निकासी गर्दछ। सन्तुलन जहाँ अडिएको हुन्छ त्यहाँ मुक्त प्रवाहलाई उक्साउछ। एक्युपंक्चर चिकित्सा साहित्यमा एउटा स्वयंसिद्ध भनाइ छ "कतै दुख्तैन, कतै रोकिँदैन, कुनै रुकावट छैन, कुनै दुखाइ छैन।”
पारम्परिक चीनी दर्शनले मानव शरीरलाई सम्पूर्ण रूपमा हेर्ने गर्दछ जसमा कुनै “कार्य प्रणालियहरू” छन् जसलाई सामान्य तवरमा शारीरिक अङ्गहरूको नाम दिइन्छ तर जुनचाहिँ त्योसँग सीधा सम्बन्धित छैन। यी पद्धतिहरूका लागि चीनी शब्द हो झांग फू, जहाँ झांग "आन्द्रा" वा ठोस अङ्ग सन्तुलन फू "आन्द्रा" वा ध्वान्द्रो अङ्गहरूको रूपमा अनुवादित गरिएको छ। रोगलाई यी, यांग क्युई सन्तुलनले रगतको सन्तुलनलाई हानिका रूपमा मानिन्छ (जुनचाहिँ होमिओस्टेसिसका केही सादृश्य छन्)। रोगको उपचार गर्ने प्रयास परम्परागत रूपले अङ्ग्रेजीमा “एक्युपंक्चर बिन्दुहरू", वा चीनी भाषामा ‘ग्ज़ू” भनिने सानो मात्राको शरीरको संवेदनशील भागमा सियाले, दबाउ , तातो आदिको गतिविधिका माध्यमबाट एउटा वा धेर कार्यप्रणालीहरूको गतिविधिलाई संशोधित गरिन्छ। यसलाई TCM मा "बेसुरापनको पेटर्न" को इलाजका रूपमा सन्दर्भित गरिन्छ।
मुख्य एक्युपंक्चर बिन्दुहरूमध्ये धेरैजसो “बाह्र मुख्य शिरबिन्दुहरू" सन्तुलन दुई "आठ अतिरिक्त शिरबिन्दुहरू (डु माई सन्तुलन रेन माई) - कुल “चौध चेनलहरू”मा पाइन्छ, जुनचाहिँ शास्त्रीय सन्तुलनमा पारम्परिक चीनी चिकित्सा ग्रन्थहरूमा त्यस मार्गका रूपमा वर्णित छ जसले क्यूई सन्तुलन “रगत” को प्रवाह हुने गर्दछ । अन्य नरम बिन्दु (“आशि बिन्दु” का रूपमा चिनिन्छ) मा पनि सुइ लगाउन सकिन्छ किनकि यस्तो मानिन्छ कि त्यहाँ एकै ठाउँमा रोकिने गर्दछ।
रोगहरू, लक्षणहरू व स्थितिहरूको श्रृङ्खला जसका लागि एक्युपंक्चरलाई एउटा प्रभावी उपचारका रूपमा प्रदर्शित गरिएको छ।
आलो बिमारी सहित उल्टी आउनु
धेरै अँठ्याइ, अनुहार, गर्दन, कुहिनो, पीठ्युको तल्लो भाग, घुँडामा, दाँतको चिकित्साको समयमा सन्तुलन, अपरेशन पछिको दुखाइ
ग्रीवा सन्तुलन काठको स्पसिलोसिस
सूर्यका किरणहरूका सात रङ्गमा विभिन्न उपचारात्मक प्रभाव छन्। यी रङ्ग हुन्, बैगुनी, इन्डिगो, नीलो, हरियो, पहेँलो, नारङ्गी र रातो। स्वस्थ रहनका लागि विभिन्न रोगहरूको उपचारमा यी रङ्गहरू प्रभावी ढङ्गले काम गर्दछन्। निर्दिष्ट समयका लागि रङ्गीन बतलहरू, रङ्गीन ग्लासहरूमा, घाममा राखिएको पानी, तेलको रङ्ग, थेरेपीद्वारा विभिन्न विकारहरूको इलाजका लागि उपकरणहरूका रूपमा उपयोग गरिन्छ। रङ्ग थेरेपीको सरल तरिका हो स्वस्थ रहने प्रक्रियामा धेरै प्रभावी ढङ्गले मदत् गर्नु।
ताजा हावा राम्रो स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा जरूरी हुन्छ। वायु स्नानका माध्यमले वायु चिकित्साको लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रत्येक व्यक्तिले दैनिक 20 मिनिट वा यदि सम्भव भयो भने त्यभन्दा धेर समयका लागि वायु स्नान गर्नु पर्छ। यो धेरै फायदामन्द हुन्छ जब बिहानीको चिसो घोटाइसँग सन्तुलन व्यायामका साथै संयुक्त रूपले गरियो भने। यस प्रक्रियामा, व्यक्तिलाई सधैँ लुगा खोलेर वा हलुका लुगा लगाइदिएर एकान्तयुक्त सफा स्थानमा हिडाउनु पर्छ, जहाँ पर्याप्त ताजा हावा उपलब्ध हुन्छ। अर्को एउटा वैकल्पिक विधि हो छतविहीन तर पर्खाल जस्तै शटरले घेरिएको कोठामा जबकि वायु प्रवाह उन्मुक्त रूपले हुन्छ तर भित्री दृश्य कसैले देख्न पाउदैन।
चिसो हावा वा पानीको द्रुतशीतल प्रभावको विपरीत प्रतिक्रिया गर्नका लागि, ती तन्त्रिका केन्द्र, जसले परिसंचरण नियन्त्रण गर्दछ, धेरै मात्रामा सतहमा रगत पठाउने गर्दछ सन्तुलनले छालालाई तात, रातो, धमनीय रगतद्वारा फ्लश गर्दछ। रक्त धाराको प्रवाह धेरै बढछ सन्तुलनले शरीरको सतहबाट रुग्ण पदार्थको उन्मूलनमा पनि तदनुसार वृद्धि हुन्छ।
वायु स्नान शरीरको सतहमा समाप्त भइरहेका लाखौँ तन्त्रिकाहरूमा सुखदायक सन्तुलन टनिक प्रभाव पार्दछ। यो आत्तेसपन, नसाहरूको दुर्बलता, गाँठाहरू, छाला, मानसिक सन्तुलन विभिन्न अरू पुराना बिमारीहरूका मामिलामा राम्रो परिणाम देखाउछ।
चुम्बक चिकित्सा एक नैदानिक प्रणाली हो जसमा रोगिहरूको शरीरमा चुम्बकको अनुप्रयोगका माध्यमले रोगहरूको इलाज गरिन्छ। यो सबैभन्दा सरल, सबैभन्दा सस्तो सम्पूर्ण दर्दरहित प्रणाली हो जसमा उपचार पछि लगभग कुनै पनि दुष्प्रभाव पर्दैन। केवल प्रयोग गरिने उपकरणमा चुम्बक हुन्छ।
चुम्बकीय उपचार विभिन्न शक्तिहरूमा उपलब्ध चिकित्सीय मेग्नेटद्वारा शरीरका अङ्गहरूमा सीधै वा शरीरका लागि सामान्य उपचारका रूपमा लागू गरिन्छ। यसका अतिरिक्त विभिन्न भागहरूमा जस्तै भुडी, घुँडो, कम्मर, आदिका लागि चुम्बकीय बेल्ट उपलब्ध छन्। चुम्बकीय हार, चश्मा सन्तुलन चूराको पनि उपचारका लागि उपयोग गरिन्छ।
लाभ: ऊर्जाले सन्तुलनमा मदत् गर्दछ; लागू क्षेत्रका लागि परिसंचरणमा सुधार गर्दछ; शरीरमा तातोपनमा वृद्धि गर्दछ
योग्य जनशक्तिको कमीका कारण योग सन्तुलन प्राकृतिक चिकित्साको विकासमा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध सन्तुलन होम्योपेथीको समान स्तरमा विकासमा बढोत्तरी हुन सकेको छैन। जबकि, हालैका वर्षहरूमा, धेरै बेसरकारी सङ्गठन, स्वयंसेवी सङ्गठन, योग सन्तुलन प्राकृतिक चिकित्सा गृहहरूका साथ-साथै डिग्री कालेजहरूको स्थापनाका लागि अघि बडदै छन्।
हालै, भारतमा यस्ता 12वटा कलेज छन्:
राजीव गान्धी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलोरसँग सम्बद्ध कर्नाटकमा तीनवटा
तमिलनाडु एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय, चेन्नईमा चारवटा
आन्ध्र प्रदेश, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ामा दुईवटा
आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढमा एउटा
बरकतुलाह विश्वविद्यालय, भोपाल आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर, गुजरात प्रत्येकमा एउटा
प्राकृतिक चिकित्सा योगमा उपलब्ध कोर्स: साढे5साल (साढे4वर्ष पाठ्यक्रम + 1 साल इन्टर्नशिप) डिग्री पाठ्यक्रम जो “बेचेलर अफ नेचुरोपेथी एन्ड यौगिक साइन्सेज (BNYS)" प्रदान गर्दछ
यस चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमका दृष्टिकोणमा केवल योग प्राकृतिक चिकित्साको दर्शन सामेल छ, जबकि यो नैदानिक उपकरणले एउटा सफल प्रेक्टिसको स्थापनाका लागि आवश्यक तौर तरिकामा जोड दिन्छ। यो कलेज सैद्धान्तिक, व्यावहारिक, नैदानिक सुविधाहरूले पूर्ण छ जुनचाहिँ छात्रहरूलाई बहु-आयामी तरिकाले प्रशिक्षित गर्नमा मदत गर्दछ। यस पाठ्यक्रममा, छात्रहरूलाई विभिन्न सारा उपचारका रूपरेखाको अध्ययन गर्ने सिफारिस गरिन्छ जुनचाहिँ पूर्म रूपले औषधीरहित सबै विषयहरूमा प्राकृतिक हुन्छ।
यो धेरै मनपर्दो छ कि देशका धेरै आधुनिक चिकित्सा संस्थानहरूले योग सन्तुलन यसका विभिन्न दिशाहरूको प्रभावकारितालाई प्रमाणित गर्नका लागि एउटा गम्भीर प्रयास गरिएको छ। मानव व्यक्तित्वको संतुलित सन्तुलन चौतरफा विकासका लागि एउटा उपकरणका रूपमा योगलाई स्वीकार गरेर, कतिपय विश्वविद्यालयले योग विभागको स्थापना गरेको छ, जहाँ शिक्षकहरूका लागि एक वर्षको अवधिको प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाइ रहेको छ। यस्ता 18 वटा विश्वविद्यालय छन् जुनचाहिँ योगमा प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान गर्दै छ। यूजीसीले पनि योगलाई प्रोत्साहन दिनका लागि कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा योग पाठ्यक्रम शुरू गर्नका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई वित्तपोषण गर्दछ। कतिपय विश्वविद्यालय सर्टिफिकेटदेखि लिएर पीएचडीको स्तरसिम्म योगमा शिक्षा प्रदान गर्दै छ। आउने वर्षमा धेरै विश्वविद्यालयहरूमा योग विभाग शुरू हुने सम्भावना छ। धेरै विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा योग स्काय स्थापित गरिएको छ शोध कार्यको प्रगति हुँदै छ। कतिपय राज्य आफ्ना शिक्षण पाठ्यक्रमहरूमा योगलाई सम्मिलित गर्ने प्रस्ताव लिइएको छ। केन्द्रीय विद्यालय, दिल्ली सरकार वा नयाँ दिल्ली नगर निगमका विभिन्न स्कूलहरूमा लगभग एक हजार योग शिक्षक नियुक्त गरिएको छ। भारतका साथै कतिपय अरू देश छन् जसमा मानसिक रोगहरूको उपचारका लागि नियमित रूपमा योगाभ्यास गराइदै छ।
यो जान्नु धेरै उत्साहवर्धक छ कि कतिपय पश्चिमी देशहरूमा प्राकृतिक उपचारको शिक्षामा धेरै जोड दिइँदै छ। त्यसलाई आवश्यक मान्यता दिईदैछ। यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेनका धेरै भागहरूमा नेशनल कलेज अफ नेचरोपेथिक मेडिसिन, ओरेगन व ब्रिटिश कलेज अफ नेचरोपेथी एन्ड अस्टिओपेथी, लन्दन जस्ता धेरै कलेज छन्।
शासनद्वारा पन्जीकृत प्राकृतिक चिकित्सा वा योगको चिकित्सक
भारतीय चिकित्साको राज्य बोर्डहरूको नाम
प्राकृतिक चिकित्सा तज्ञ को संख्या
भारतीय चिकित्सा बोर्ड, सिकन्दराबाद, ए.पी.शासन
कर्नाटक आयुर्वेद, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रेक्टिशनर बोर्ड, बेंगलोर, कर्नाटक शासन
तमिलनाडु भारतीय चिकित्सा बोर्ड, चेन्नई, तमिलनाडु शासन
एम.पी. आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल, एम.पी. शासन
छत्तीसगढ़ आयुर्वेद, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन
अस्पताल, बिस्तरहरूक संख्या एवं डिस्पेंसरीहरू:
आन्तरिक अस्पताल – कुल लगभग 10000 बिस्तरका साथै लगभग 250 (प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग)
क्लिनिक (बाह्य रोगी) सारा भारतमा लगभग 300 (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा)
योग अस्पताल – ०६
प्राकृतिक चिकित्सा उपकरणहरूको निर्माण इकाइहरू – लगभग 40
स्रोत: आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार